I-makeup enhle kakhulu ye-Halloween yamadoda | Amadoda aSitayela
I-Halloween makeup yamadoda
UMiguel Serrano | | Indlela yokuphila, Ukuzilibazisa
Uma kulo nyaka ufuna ukufaka esikhundleni samaski we-latex ngesimonyo esesabekayo se-Halloween sabesilisa, lapha sikunikeza imibono eminingi emihle yokubeka ibha phezulu ephathini lezimpahla.
Noma ukwakheka ngokwemvelo kuthatha isikhathi esiningi nomzamo, inzuzo iba nkulu futhi. Futhi yilokho umphumela wemvunulo uhlale umxhwele kakhulu lapho usebenza esikhunjeni sobuso, ikakhulukazi lezo ezihlobene nokwesaba.
1 Ukwakhiwa kwe-Halloween Kwabesilisa: Ama-Classics
2 I-Halloween makeup yamadoda: Ama-Movie, uchungechunge namahlaya
2.1 I-White Walker
Ukwakhiwa kwe-Halloween Kwabesilisa: Ama-Classics
Ama-zombies akudala, ama-vampires kanye nama-skulls ukubheja okuphephile kokwakheka kwakho kwe-Halloween. Izinga lobunzima liphezulu kwezinye izimo kunakwamanye, kepha ngenxa yezifundo ezihamba ngezinyathelo, noma ngubani angaziqedela ngokwenelisayo, yize engenalo ulwazi oluningi emkhakheni.
Inzuzo yokufaka izimonyo zombie ukuthi banezingubo ezixegayo kakhulu. Njengoba ngesikhathi sokuguqulwa kungenzeka ukuthi benza imisebenzi engenamkhawulo noma basebenzise imisebenzi eminingi, usuvele unakho konke okudingayo kuyo yonke imvunulo esekhabetheni lakho. Lesi simo sikuvumela ukuthi ukhiphe ubuhlakani bakho kanye nokuhleka kwakho.
Ukwenziwa kwe-Vampire unyaka nonyaka uhlala uphakathi kwamakhemikhali e-Halloween athandwa kakhulu amadoda. Akuthathi isikhathi eside kakhulu, futhi njengamaZombi, ungayinikeza ukuthinta kwakho siqu, kokubili ebusweni nasekhabethe lezingubo. Ngalo mqondo, cabanga ukufaka esikhundleni se-cape ejwayelekile ngejazi elimnyama lomsele lesikhumba ukuze i-vampire yakho ikhiphe ama-vibes anamuhla.
Ukhakhayi alusoze lwehluleka ngeHalloween. Impumelelo yayo ingabangelwa iqiniso lokuthi luhlobo lwezimonyo ukuthi wonke umuntu ulufake ngaphakathi kungenziwa ngaphandle kokulandela noma yiluphi uhlobo lokufundisa. Kodwa-ke, sikukhuthaza ukuthi ulandele lena uma ufuna ukwakheka kogebhezi lwakho ukubanga umuzwa wangempela.
Ukukhetha ugebhezi njengengubo ye-Halloween kunenzuzo yokuthi awudingi izingubo ezithile. Ungagqoka okujwayelekile imvunulo yamathambo, kodwa kwanele ngezingubo ezimnyama ezikusiza ukulungisa ubuso njengokugxila kukho.
I-Halloween makeup yamadoda: Ama-Movie, uchungechunge namahlaya
Amabhayisikobho, uchungechunge namahlaya amele umthombo ongashi wemibono yokwenza izimonyo ku-Halloween. Njengoba kuyizinhlamvu ezibonakalayo kakhulu, kuyadingeka ukuthi unake kakhulu imininingwane emincane lapha. Ngakho-ke izinga lobunzima liyakhuphuka.
Yize kunezinketho eziningi zokuqedela ikhabethe, zonke zidinga ukuhlelwa okuningi kakhulu kunangaphambili. Ngokwalesi sizathu Ziyizembatho ezingashiywa ngomzuzu wokugcina uma ufuna umphumela ungabi nasici.
Uma ungumlandeli wochungechunge lwe 'Game of Thrones', uzothanda lesi sifundo sokwenza izimonyo esimhlophe. Uzomangala futhi ukuthi kulula kangakanani ukuba ngesinye sezidalwa eziphazamisayo ezineqhwa, ezinamandla okwenza izinwele zime njalo lapho zivela esikrinini.
Ngokungafani nezinye izimonyo ezikhuthazwe ngabahamba ezimhlophe, kulokhu akusetshenziswa izitho zokufakelwa ezicasulayo noma ama-contact lens. Ngale ndlela, noma ngubani angakusebenzisa ekhaya ngemikhiqizo eyisisekelo yokwenza izimonyo, umphumela umangale njengalowo owenabile.
Ubuntu obudidekile bukaJoker bumenze waba ngumdwebi wakudala we-Halloween. Ngenxa yazo zonke izinguquko okwenzeke kuzo emashumini eminyaka, sinezinketho eziningi esingakhetha kuzo. Ukuphela kwento abafana ngayo ukuthi kufanele usebenzise isifutho esiluhlaza esiningi ezinweleni, noma usebenzise i iwigi eluhlaza.
Uhlobo lwakamuva lwalo mlingiswa oyisithonjana yilolo 'lweSuicide Squad'. UJared Leto's uyiJoker ehluke kakhulu kunalokho ebesikujwayele. Ugqoka amaketanga egolide, ama-tattoo emzimbeni wakhe wonke namakepisi emazinyweni akhe.
Uma ukhetha i-Joker kumahlaya, cabanga ngale makeup enhle. Lolu hlobo lwezimonyo lumnandi kakhulu. Futhi yilokho shintsha ngokuphelele ubuso bakho, kukwenze ungaziwa. Ingenye yalezo ezidinga ukuhlolwa okuthile ngaphambili ukuze ubusuku be-Halloween buphelele. Kepha njengoba ubona, umvuzo uwufanele impela.
I-horror saga ethi 'Saw' ifaka esinye sezikhohlakali ezisonteke kakhulu e-cinema: iJigsaw. Njengawo wonke umuntu, lena inomsebenzi wayo, kepha iyona elula kunazo zonke izimonyo ezintathu ezifakiwe kulesi sigaba.
Kuyindlela ongayibheka uma isikhathi siphonswe kuwe futhi udinga ukwakheka kwe-Halloween kwamadoda ongakwenza ngokushesha kepha ngasikhathi sinye kuyesabeka. Ikhabethe libuye lilula njengokufaka isudi yakho emnyama. Uma kukhulunywa ngothayi obomvu womnsalo, ungenza owodwa emaminithini ambalwa ngezinto osuvele unazo ekhaya.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Indlela yokuphila » I-Halloween makeup yamadoda
I-Prostatitis: izimbangela, ukuxilongwa, ukwelashwa nokuvimbela
Izitayela zesimanje zamadoda